Maalinta: Oktoobar 3, 2017
Daqiiqadii ugu dambeeyey! Diyaaradaha Marmaray Joojiyay
Duulimaadyadii Marmaray ayaa istaagay cilad farsamo awgeed. Marmaray ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay, nedeniyle cilad farsamo awgeed, duullimaadyadeenii waa la joojiyay ilaa ogeysiis labaad ”. Duullimaadyada lama samayn karo ilaa ku dhowaad 15.30. Rakaabka isticmaalaya Marmaray [More ...]
Malatya waxaa la dhisay gaari telefishan
Dowlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka Malatya waxay bilaawday inay naqshadeyso saldhigyada Mashruuca Cable Car. Malatya 'riyada sanadlaha ah ee' 50 'iyo badhtamaha magaalada si loo gaaro shir madaxeedka TOKI ayaa loo dejin doonaa mashruuca gawaarida fiilada [More ...]
Tirada gawaarida 12 ee ka gudbaya buundada Cusgaani bishiiba ma aysan gaarin xitaa kala badh tirada dammaanad ee gawaarida 14 milyan. Taasi waxay keenaysaa in muwaadinku la kulmo culays cashuureed culus. Bridgega Osmangazi wuxuu laayaa jeebka muwaadinka. [More ...]
Thessaloniki Tour oo leh sariir gaar ah oo loogu talagalay geerida Ataturk ee dhimashada
Sannad guuradii Atatürk dhimashadeeda, Gaadiidka TCDD AŞ-RAYTUR wuxuu abaabuli doonaa safar uu ku tegi doono Tesaloniika tareenka gaarka loo leeyahay. Gaadiidka Turkish Tareennada State ee sida ku qoran war ah, TCDD Gaadiidka Inc. rAyt-aasaasaha of the Republic of Turkey kaashanaya Veterans [More ...]
Diyaar garowga Dhismaha London Underground
Shaqaalaha dhulka hoostiisa mara ee London waxay isu diyaarinayaan diyaar garowga shaqo maalmeedka 5 ee maanta iyo bisha Oktoobar ee 24. Xubnaha Ururka Tareenka, Badaha iyo Gaadiidka Shaqaalaha (RMT) iyo Ururka Shaqaalaha Tareenada (Aslef) [More ...]
28 Milyan Sanad ah oo ka tirsan Midowga Yurub oo ka socda Midowga Yurub oo ku socda wadooyinka Tareenada Lithuania
Guddiga Midowga Yurub wuxuu go’aansaday inuu ku bixiyo 28 milyan oo Euro oo loogu tala galay Wadooyinka Tareenka ee Lithuania, kaas oo kharibaya kaabayaasha tareenka ee dalka, wuxuu fidiyaa wadooyinka gaadiidka iyo carqaladeynta Komishanka Midowga Yurub (EU) [More ...]
Madaxweynuhu wuxuu baadhay Traküsü Özsan
Duqa Magaalada Malatya ee Caasimadda Ahmet Cakir; Ik Waxaan gaarnay tayo aad u culus oo dhanka gaadiidka dadweynaha ah Tr Khadka taraafikada, oo ka dhigaya gaadiidka dadweynaha ee Malatya inuu neefsanayo una abuuro raalli weyn rakaabka, waxaa loo dheereeyay isgoyska junZSAN Estate Estate. dheeraad ah [More ...]
RayHaber 03.10.2017 Warbixinta Shirka
Xaramka Suuq-geynta Karaman iyo Isku-xirka Tareenka ee OSB
Waa in aan dhisnaa Warshadeena Qaranka
dagaal xoreynta ka dib, markii Turkey Ataturk ee, xataa xaaladaha adag ka dibna iibin karo dalalka shisheeye soo saaro Diyaaradaha qaranka iyaga u gaar ah. Ka dib markii dagaal xoraynta, waqti Turkey Ataturk ee, xaaladaha markaas adag [More ...]
Shil shaqo oo ka dhacay Kaamas-Mahmutbey Mashruuca Mashruuca Dhismaha 1
Shaqaalaha 1 ayaa si xun loogu dhaawacay shil shaqo oo shalay ka dhacay goobta dhismaha ee Metro ee Kağıthane, İstanbul. Sida laga soo xigtay macluumaadka la helay, shilka, dhismaha dhismaha socda ee Kabatas-Mahmutbey Metro khadka Caglayan saacad 15: 00 [More ...]
Maamulaha Guud ee TCDD Apaydin, oo laga aasaasay Kayseray
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, Kayseri Transportation Inc. Maareeyaha guud Feyzullah Gündoğdu oo ay weheliyaan KAYSERAY ayaa sameeyay taraamyo tareeno fudud. Maareeye kuxigeenka Guud Ismaaciil H.Murtazaoğlu waxaa weheliyay Apaydın. TCDD [More ...]
Apaydin abaalmarin ayuu ka helay wasiirka ee Özhaseki
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınWaxaan ka helay Mashruuca Isku-xirka Xawaaraha Sare ee Yüksek ee Silk Road den abaalmarinta Wasiirka Deegaanka iyo Qorshaynta Magaalooyinka Mehmet Özhaseki xafladda lagu qabtay Kayseri. Waxaa soo abaabulay Midowga Injineeriyada Caalamiga ah ee Turkiga iyo naqshadeeyayaasha [More ...]
Ogeysiinta wax soo iibsiga: Hawlgalka iyo Dayactirka Xarunta Isgoyska (TÜVASAŞ)
Iibsiga Heat Xarunta Hawlgalka iyo Dayactirka Services Turkiga baabuur Warshadaha TÜVASAŞ / WAAXDA iibsiga ee kulaylka iyo DAYACTIRKA SERVICES GANACSI XARUNTA shaqaaleysato adeegyada iibsiga ee Public Law No. 4734 19 Qodobka [More ...]